२४ भदौ । नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन) र मानव अधिकार तथा ग्रामिण वातावरण संरक्षण केन्द्र (हुरेक) ले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कार्यक्रम, तयारी र युवाहरुलाई कसरी संलग्न गराउन सकिन्छ भनी जनप्रतिनिधि र मुख्य सरोकारवालाहरुलाई सोधेका थिए । सान्दर्भिक प्रश्न र उत्तरलाई सम्पादन गरेर सेरोफेरोले चौतारीमा स्थान दिएको छ ।
अध्यक्ष, बराहताल गाउँपालिका, सुर्खेत
हाम्रो समाजमा धेरै समस्या छन् । बालबालिकाहरुका लागि कसैले पनि लगानी गर्न जानेको छैन । वास्तबमा बालबालिकाहरुका लागि लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । बालबिवाह तथा लागूपदार्थ दुव्र्यसनी जस्ता समाजिक अपराधका लागि घरबाटै अभियान शुरु गर्नुपर्छ ।
हाम्रो गाउँपालिकामा पनि डोजर आंतक छ । यसरी सबै क्षेत्रबाट आवाज उठ्यो भने यो आतंक नियन्त्रण भएर जानेछ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका कुरामा हामीले बजेटको राम्रो व्यवस्था गरेका छौं । जनचेतनामुलक कार्यक्रम समेत गर्दै आएका छौं । तीनवर्षे आवधिक योजना बनाई चिङगाड गाउँपालिकाको खाका तयार बनाई अगाडि बढ्ने योजनामा छौं ।
विपद व्यवस्थापनको आवश्यक पूर्वतयारी र सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेका छौं । यसका लागि वडा स्तरिय समिति समेत गठन भएको छ । हामी विपद व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा छौं ।
वरिष्ठ अधिकृत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका
हरेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा डोजर आतंक छ तर हाम्रो नगरपालिकामा त्यस्तो आतंक छैन । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापनका लागि नगरका हरेक योजनामा ५ प्रतिशत विपद व्यवस्थापनका लागि छुट्टाउने गरको छ । त्यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका १६ वटै वडाहरुमा विपद व्यवस्थापन कोषको समेत व्यवस्था गरको छ । सबैमा उद्धार सामाग्रीहरु समेत व्यवस्था छ ।
विशेषगरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जनचेतना मुलक कार्यक्रममा ध्यान दिएको छ । पानी शुद्धीकरण गरी खानको लागि चेतना मुलक कार्यक्रम गरेका छौं । हिंसा र नागरिक सुरक्षाका विषयमा समेत एसपी तथा सिडिओसँग बसेर छलफल चलाएका छौं । विपद व्यवस्थापनमा युवाहरुलाई परिचालन गर्ने हाम्रो योजना छ ।
अध्यक्ष, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१०
१० नं. वडामा विपद व्यवस्थापनको लागि हामीहरुले एकल महिला, विभिन्न संघसंस्थालाई एक लाख रुपैयाका विपद व्यवस्थापन सामाग्री खरीद गरिसकेका छौं । ढल निकासको लागि गुरुयोजना तयार गर्दै छौं ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको निकास एउटा मात्रै छ । निकासका लागि मन्त्री तथा हामी जनप्रतीनिधिहरु लागिपरेको छौं । लागूऔषध न्युनीकरणको लागि अघिल्लो वर्ष ५० हजार छुट्याइएको थियो । यसका लागि वडाका निमावि तथा माविस्तरका विद्याललयमा सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छौं ।
लागू औषध न्युनीकरण सचेतना कार्यक्रम का लागि यो वर्ष १ लाख ५० हजार छुट्याइएको छ । वडा नं. १० को पुर्वी भागमा स्वास्थ्यको सुविधा समेत थिएन म निर्वाचित भएपछि शहरी गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन गरका छौं । वहुविवाह रोक्न विवाह दर्ता गर्न आउनेलाई अविवाहितको प्रमाण जुटाएपछि मात्रै विवाह दर्ता गरिदिने कार्य थालनी गरेका छौं ।
अध्यक्ष, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११
विपद व्यवस्थापनको लागि वडा नं. ११ मा केही योजना अघि सारिएको छ । ढल निकासको कुरामा हामी सचेत छौं । जग्गाको अव्यवस्थित प्लटिङका कारण ढल निकाश राम्रो संग हुन सकेको छैन । हामीहरु यसमा गुरुयोजना बनाएर अगाडि बढ्दै छौं ।
लागूऔषध प्रयोग कर्ताको संख्या घटाउन सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भैरहेको छ । त्यसमा विद्यार्थी मात्रै होइन शिक्षकलाई पनि चेतनामुलक कार्यक्रमको खाँचो छ ।
समाजका रहेका विभिन्न खालका विकृति विसंगतीहरुको अन्त्यका लागि समेत वडा नं. ११ ले सोचेको छ । बेरोजगार समस्या सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । यसमा नगरपालिकासंग साथसाथै हामीले काम गर्नुपर्छ ।
अध्यक्ष, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६
फोहोर मैला व्यवस्थापनमा १५ महिनामा धेरै फरक भएको छ । जनचेतनाका कार्यक्रम समेत चलाएका छौं । वीरेन्द्रनगर ६ कर्णालीको मुटु हो । यहाँ थुप्रै समस्या छन् । विभिन्न मेडिकलहरुले सुई प्रयोग गरी बाटोमा फालेको भेटिन्थ्यो तर म निर्वाचित भएपछि अहिले त्यो अवस्था छैन ।
लागू औषध नियन्त्रणको लागि तथा हिंसा र चोरी नियन्त्रणका लागि शनी हल चोकमा साईरन जडान गरेका छौं । फोहर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइट बनाएका छौं । त्यस्तै वीनपाको पिपल चौतारा नजिक स्मार्ट शौचालय बनाउने योजना छ । युवतीहरुलाई पनि स्वरोजगार बनाउने बारे योजना निर्माण गर्दैछौं ।
अध्यक्ष, जिल्ला युवा परिषद्, सुर्खेत
युवाको क्षेत्रमा काम गर्ने हिसाबले लागूऔषध ओसारपसार तथा प्रयोगबाट युवाहरुलाई बचाउनको लागि युवा सम्मेलन नै गरेका छौं । त्यस्तै स्थानिय तहबाट युवा लक्षित कार्यक्रम कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुरामा म लागिरहेको छु ।
स्थानीय तहका हरेक वडामा वडा अध्यक्ष संरक्षक रहेने गरी युवा क्लब गठन गर्ने र विभिन्न अभियान सञ्चालनको तयारी भैरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न रहेका युवाहरुलाई संगठित गर्ने हाम्रो योजना छ । बालश्रम, हिंसा, चोरी लागूपदार्थ दुव्र्यसनी रोक्न युवा परिचालन गर्ने हाम्रो तयारी छ ।